Piston Air Compressor Factory - Mpanamboatra Compressor Air Piston China, mpamatsy
Antsoy izahay: + 86-180-6788-0010
Compressor Screw Air PM
Compressor Air Screw
Screw Air Screw amin'ny dingana roa
Compressor-nateraky ny fehikibo
Paompy vy vy
Compressor rivotra mivantana an'ny BM
Air Compressor mivantana an'ny fiara mivantana
Paompy tsy misy solika
Air Compressor tsy misy menaka mangina
Fitaovana fitsaboana ny rivotra
Fanamainana rivotra vita amin'ny rivotra
Paompy rano fantsakana lalina
BM Type 2HP / 24L & 50L Di ...
Air Compresor entin'ny fehikibo
2inch hatramin'ny 8inch Submersible ...
Medical Lab Dental Silent Portable 0.75HP ~ 4HP Oil Free Compressor
Ny compresseur rivotra tsy misy solika azo entina dia manome rivotra madio tsy misy menaka ary ny feo dia ambany noho ny 68db. Ny vidin'ny fikolokoloana dia ambany ary lava ny androm-piainana. Ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana, faritra laboratoara sy simika sns.
Ny fehikibo entin'ny fehikibo dia miorina amin'ny paompy, motera, tanky ary singa mifandraika indrindra. Ny herinaratra dia manomboka amin'ny 0.75HP ka hatramin'ny 30HP. Ny paompy isan-karazany dia azo ampifanarahina amin'ny fahaizan'ny tanky hafa mba hisafidianana bebe kokoa. Ampiasaina betsaka amin'ny loko hoso-doko, haingon-trano, asa vita amin'ny hazo, fitaovana mandeha amin'ny pneumatika, fitaovana mandeha ho azy sns.
BM Type 2HP / 24L & 50L Direct-Driven Air Compressor miaraka amin'ny CE / UL Certification
Ny compresseur rivotra tarihin'ny mivantana dia maotera mifandray mivantana amin'ny paompy rivotra piston mifamaly izay napetraka teo amin'ny fitoeran-drivotra. Izy io dia karazana portable ary tena mora entina. Ny herinaratra dia manomboka amin'ny 0.75HP ka hatramin'ny 3HP, ary ny tanky dia manomboka amin'ny 18liters ka hatramin'ny 100liters. Izy io dia azo ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny asa an-trano, asa fivezivezena anaty sy ivelany, toy ny haingon-trano, famantsihana, hosodoko & famafazana, fanamboarana sns.
FL Type 2HP / 24L & 50L Direct-Driven Air Compressor miaraka amin'ny CE / UL Certification
New Silent Medical Laboratory Dental Oil Free Pump 550W 750W 1100W 1500W
Ny paompin-tsolika tsy misy solika azo entina dia manome rivotra madio tsy misy solika, ary ambany noho ny 68db ny tabataba. Ny vidin'ny fikolokoloana dia ambany ary lava ny androm-piainana. Ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana, faritra laboratoara sy simika sns. 550W, 750W, 1100W, 1500W ny hery ary azo ampitahaina amin'ny haben'ny fahaizany.
Kalitaon'ny 0.75HP avo lenta ~ 30HP Cast Iron Piston Air Pumps for Air Belt-driven Air Compressor
Ny paompin-drivotra piston mifamaly dia malaza eny an-tsena noho ny vidiny mifaninana, mahomby angovo ary fe-potoana lava kokoa. Ny paompin-drivotra piston reciprocating dia miaraka amina crankcases vy sy silinder, piston aluminium na vy, alim-by aluminium na vy, ary peratra piston sy kalitao tena avo lenta. Ny fikorianan'ny rivotra amin'ity andiany ity dia manomboka amin'ny 60L / Min ka 4500L / min. Ny fanamboarana matanjaka dia mahatonga azy io ho fitaovana azo antoka, maharitra ary maharitra maharitra ho an'ny asa any ivelany na any anaty trano.
Telefaona: + 86-180-6788-0010